Video Cropper: Olee otú akuku Videos ka Full ihuenyo
A ga doro anya na-adị mgbe gị mkpa ubi gị videos. Ka ihe atụ, mgbe ị na-nwetara ụfọdụ video faịlụ na nwa Ogwe n'elu na ala ala ma ọ bụ na ị chọrọ ubi videos na nnukwu akụkụ dabara na obere enyo nke ngwaọrụ. Biko mara: na software-atụ aro na isiokwu a bụ n'ihi na Windows, ọ bụrụ na ị mkpa ụfọdụ nkuzi banyere otú ubi vidiyo na Mac, biko pịa ebe a.
Ezie na ọtụtụ video edezi software ga-eme ọrụ, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) ukwuu tụrụ aro. Ọ bụ a dị ike video nchịkọta akụkọ na-abụghị nanị ihe ubi gị video faịlụ, ma-enye gị ohere welie video na visual mmetụta, ikwu n'ụzọ, utu aha ndị ọzọ. Mgbe ị na-rụchaa video edezi, ị nwere ike mgbe niile ịchọta onye kwesịrị ekwesị mmepụta format n'ịwa gị ikpeazụ n'ihi enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ. E wezụga nke ahụ, ị nwekwara ike mbupụ ọzọ nhọrọ, eg òkè na YouTube ma ọ bụ ọkụ na-DVD video ozugbo.
Easy-eji Video Cropper: Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Akpaghị aka ma ọ bụ aka ubi gị video n'ime dị iche iche size.
Akwado a dịgasị iche iche nke video formats gụnyere AVI, MOV, FLV, WMV, MKV na ndị ọzọ.
Mee mmetụta, ojiji, nzacha, tinye utu aha, music na logo dị ka amasị gị.
Export dị iche iche formats, ozugbo uploads online ma ọ bụ ọkụ discs.
1. Import video faịlụ ka ubi
Ị nwere ike ma pịa "Import" na isi windows na họrọ faịlụ site na kọmputa gị, ma ọ bụ nnọọ nanị ịdọrọ na dobe faịlụ ka onye ọrụ Album n'ihu na-agbakwunye ha ka ha na usoro iheomume maka edezi.
2. n'Ubi videos
Ugbu a ịdọrọ vidiyo si na onye ọrụ Album ka video track na usoro iheomume na abụọ pịa video. Ị ga-ahụ a "n'Ubi" button n'etiti ihuenyo (esote Laghachi button). Pịa ya ka ịnweta edezi window ka ubi videos.
Ka ị pụrụ ịhụ, e nwere 3 nhọrọ na ala: aka họrọ akuku ebe, na-akuku ebe ke 16: 9 ma ọ bụ 4: 3 akụkụ redio. Rịba ama na ị kwesịrị ị na họrọ a kwekọrọ ekwekọ akụkụ redio mgbe exporting ma ọ bụrụ na ị họọrọ a redio ebe a. Ma, nwa mmanya ga-eme. Ka ihe atụ, i cropped gị video 16: 9, na mgbe ahụ ị chọrọ ka mkpebi na "Advanced ntọala" dị ka 480 * 272 ma ọ bụ 1280 * 720.
3. Export cropped video
Mgbe n'ihi bụ OK, pịa "Mepụta" ịzọpụta gị cropped video. Ị nwere ike mbupụ video ọ bụla na-ewu ewu formats na Obodo kọmputa site na ị na-ahọrọ "Format". Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu video e kere eke na iPod, iPhone, iPad, pịa "Ngwaọrụ" na họrọ thumbnail nke ngwaọrụ gị. I nwekwara ike ozugbo bulite gị cropped video ka YouTube ma ọ bụ ọkụ na-DVD discs maka egwu na TV iji a DVD Player.
Video cropping Atụmatụ:
1. Ọ bụ mgbe niile a ezi echiche ka ịhụchalụ gị video n'ihu gị mbupụ ha ka ha draịvụ ike gị. Jide n'aka na video bụghị e cropped ukwuu.
2. Odokwara akụkụ ruru nke cropped video bụ otu ihe ahụ na nke họrọ mmepụta usoro.
3. Cheta na àgwà nke cropped video na-adabere na họọrọ mmepụta format ruo n'ókè ụfọdụ. Ka ihe atụ, ị họrọ obere akụkụ, ma mmepụta dị ka nnukwu akụkụ nke video, àgwà ọ gaghị adị mma. Dị otú ahụ ikpe, nta mmepụta akụkụ na-họọrọ.
> Resource> Video> Top 10 Free Christmas Movies Online